Mogadishu Journal » Dagaal ka dhacay deegaan dulleedka kaga beegan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe
Mjournal :–Inta la og-yahay ugu yaraan sideed ruux ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen kaddib dagaal beeleed shalay gellinkii dambe ka dhacay bariga degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe.
Dagaalada ayaa daba socday dagaallo horay beelahan u dhexmaray, iyadoo la sheegay in deegaan lagu magacaabo Jilliyaale gabi ahaantiis la gubay, iyadoo dadkii ku noolaana ay isaga carareen.
“Waxaa dagaalka ku dhintay sided ruux tiro kalena waa lagu dhaawacay, dagaalka waxaa uu ahaa mid daba joogay ama daba socday dagaallo horay uga dhacay deegaannka,’’ ayuu yiri qof ku sugan halka lagu dagaallamay.
Wararku waxaa ay sheegayaan in xaalada magaalada Jowhar xalay aheyd mid kacsan, iyadoo laga baqdin qabay in ay saameyn ku yeeshaan dagaallada la sheegay in ay ka dhaceen duuleedka magaalada.
Wararka saakay laga helay deegaannadii lagu dagalaamay ayaa sheegaya in xiisado colaadeed ay ka taagan yihiin, iyadoo maamulka gobolkana uu isku dayayo inuu joojiyo dagaal beeleedkan, khasaaraha badan geystay.
Wararku waxaa ay sheegayaan in dagaallku uu bilaawday kadib markii kooxo hubeysan ay weerareen mid ka mid ah deegaannada ku yaalla bariga degmada Jowhar, halkaasna ay ku dhaawaceen afar qof oo saddex ka mid ah ay haween ahaayeen.
Beelahan ay dirirtu u dhexeysa ayaa isku haysta dhul beereed ku yaalla deegaannada ay ku dagaalamayaan, iyadoo dagaalkan uu sababay inay ka barakacaan deegaannadooda dad badan oo labadan beelood kasoo kala jeeda.
Dagaallada laga soo sheegayo bariga magaalada Jowhar ayaa ku soo beegmaya xili dadka ku dhaqan gobolka dhibaato xoog leh ku qabaan fatahaad uu sameeyay wabiga shabeelle, taasoo keentay in kumanaan qoysas ah ka barakacaan deegaannadii ay ku noolaayeen.